Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): May 2016
မန်မာပြည်မှာ တကယ် သောင်းကျန်းနေတဲ့ အဖွဲ့တွေ ဘယ်သူတွေလဲ.. သူပုန်က ဘယ်သူတွေလဲ ဆုိုတာ ခွဲခြား သိမြင်နုိုင်ပါစေ။
at 5/26/2016 09:40:00 AM
တုိုင်းရင်းသား လက်နက်ကုိုင် တော်လှန်ရေး တပ်များ ကုို သူပုန် လုို့ သမုတ်ရင် တုိုင်းရင်းသား တော်တော်များများ ကုိုယ့်အမျိုးထိတော့ မခံမရပ်နုိုင် ဖြစ်ကြတာ တွေ့ ရပါတယ်။ ကျနော် က အစ ပေါ့။
တကယ်တော့... ဗမာစကားအရ သူပုန် ဆုိုလဲ မှန်တာ ပါပဲ။
ဒါပေမယ့်... အခု မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတာက ပြောင်းပြန်... သူပုန် ဆုိုသူတွေ တုိုက်နေတာ NLD အစုိုးရ ကုို မဟုတ်ဘူးဗျ။
NLD အစုိုးရ ကုို KIA နဲ့ တုိုင်းရင်းသား လက်နက်ကုိုင် အဖွဲ့ တော်တော်များများက ထောက်ခံတယ်။ ကြိုဆုိုတယ်။ ဗမာ စစ်တပ် က မကြိုက်ဘူး။ မကြိုဆုိုဘူး၊ အတုိုက်အခံ လုပ်နေတာ တွေ့ ရတယ်။ သူတုို့ကုို အစုိုးရ စစ်တပ် လုို့ သုံးနှုန်းတာလဲ မကြိုက်ဘူး။
ဒီတော့.. အစုိုးရ ကုို ပုန်ကန် နေတာပေါ့။
သောင်းကျန်းသူ (insurgents) ဆုိုတာ အစုိုးရကုို တော်လှန်ယုံ သက်သက် မဟုတ်ပဲ၊ ကုိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က အမြင်မတူ၊ ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးမတူ အားလုံးကို တုိုက်ခုိုက်ပြီး၊ ရုိုးရုိုးသာမန် အရပ်သား (Civilians) များကုို ပစ်မှတ်ထား အုပ်စုဖွဲ့ သောင်းကျန်းနေတဲ့ (လက်နက်ကုိုင်/မကုိုင်) အဖွဲ့တွေကုို ခေါ်တာပါ။
မြန်မာပြည်မှာ တကယ် သောင်းကျန်းနေတဲ့ အဖွဲ့တွေ ဘယ်သူတွေလဲ.. သူပုန်က ဘယ်သူတွေလဲ ဆုိုတာ ခွဲခြား သိမြင်နုိုင်ပါစေ။
Yesterday at 10:59pm ·
The victim of ‪#‎BurmaArmy‬ testified himself on facebook who was tortured and accused as if he isamember of KIA at Namsan Yang, on the road between Myitkyina to Manmaw.
""တိုင်းရင်းသား သူပုန်မရှိသော ဗမာပြည်မြို့တော်ကြီးမှ ကလေးသူငယ်များဘဝ"" စစ်ခွေးလော်ဘီတွေေ ပြောတာ သူပုန်မရှိရင်တိုင်းပြည်တိုးတက်ပြီဆိုလို့
at 5/26/2016 07:49:00 AM
Awng Zet Kachin Du
92Sinli Uma, Machyang Si and 90 others
Aeron Labya မျက်စိမိတ်နားပိတ်ထားတယ်
Sin War ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ကံကြမာဟာ ကချင်လူမိူးလက်မှာပဲ ရှိတယ်
: ကနေဒါနိုင်ငံသံအမတ်များနှင့် KDNG တွေ့ဆုံစကားပြောခြင်း.
at 5/22/2016 10:17:00 AM
၂၀.၅.၂၀၁၆ သောကြာနေ့တွင် ကနေဒါနိုင်ငံသံအမတ်များသော1. Ambassador Mark McDowell, 2. Martin Laflamme – Deputy Director, Southeast Asia 3. Philip André Cordier, First Secretary (Political) 4. Beverly Carmichael, First Secretary (Development)နှင့် KDNG ရုံးတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့သည်။ KDNG မှ ကချင်ပြည်နယ်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော မြစ်ဆုံရေကာတာ၊သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးပြသာနာ၊ စစ်ရေးပဠိပက္ခနှင့် IDPs ပိုများလာရခြင်း၊ လက်ရှိပြုလုပ်နေသောပြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ projector ဖြင့်ရှင်းလင်းဖေါ်ပြခဲ့သည်။
KDNG မေး။ ။ ကျနော်ရိုးသားစွာနှင့် ပွင့်လင်းစွာမေးပါ့မယ်။ ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ ယခုလက်ရှိလုပ်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထောက်ခံပါတလား? NCA ကိစ္စမှာမပါဝင်ဘူးလား? လက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ IDPs ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိနေတယ်။ ပြည်သူတွေ နေ့တိုင်းဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကနေတာနိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်ကဘယ်လိုလဲ? လူထုရှင်ကြားဘာကို ထုတ်ပြန်ချက်ရှိသလား? လို့မေးခဲ့ပါတယ်။
Ambassador ဖြေ။။ အောက်ခြေအဆင့်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုဒါ အခုလို KDNG မှdocument အတိအကျနှင့် ရှင်းလင်းဖေါ်ပြ၍ သိရှိခွင့်ရသည့် အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ ခင်္ဗျာတို့က ကျနော်တို့ ထက်ကိုယ့်ဒေသမှာ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာပိုသိတာပါ။ ကျတော်လည်းရိုးသားစွာဖြေကြားပါရစေ၊ ခင်္ဗျာတို့ပြောနေသော လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်က ခင်္ဗျာတို့ခံယူချက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ အစိုးရသစ်လည်းကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကျတော်တို့လည်း ခင်္ဗျာတို့ဒေသမှာ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေကို အသေးစိတ်မသိဘူး။ လေ့လာနေဆဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်ကို ရောက်ရှိလာတာပါ။ ကျနော်တို့က လက်ရှိအစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေှးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ရံပုံငွေလည်း ထောက်ပံ့ပေးတာမရှိဘူး။ လူသားချင်းဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုတော့ ကျတော်တို့ကူညီတာတွေရှိတယ်။
ကချင်တွေလိုချင်တာ ပြည်ထောင်စုမှ လုံးဝ တီးခြားခွဲထွက်ဖို့လား? အဓိကပြသာကဘာလဲ? ယခုက စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လိုချင်သလား? ပြန်မေးပါတယ်။
KDNG ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့လိုချင်တာ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးကို ပထမဦးစားခြင်းထဲမှာမပါဘူး။ ကျနော်တို့ကချင်ပြည်နည်က အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် အပစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေးလုပ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကြောင့် ဒုက္ခဆိုးကျိုးပေါင်းမြောက်များစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော (၁ရ) နှစ်လုံးလုံးအတွေ့အကြုံရှိပြီးပြီဖြစ်တယ်။ ပထမဦးဆုံးကျတော်တို့လိုချင်တာက နိုင်ငံရေးတန်းတူအခွင်အရေးဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးအရပြောမယ်ဆိုရင် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်အပြည်ရရှိရေးပါ။ နံပါတ်(၁) က ကချင်ပြည်နယ်၏ အဏာဂါတ်အတွက် နိုင်ငံရေးပြသာနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း (၂) နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မလုပ်နိုင်သေးသရွေ့ သဘာသယံဇာတထုတ်ယူသုံးစွဲမှုနှင့် အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကို ရပ်တန့်ထားရမည်။ (၃) သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ က။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ခ။ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် ဂ။ အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် အခွန်ဘဏ္ဍာခွဲဝေကျင့်သုံးခွင့်များကို ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရတွင် အာဏာပေးအပ်ရမည်။ ရရှိသော အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများကို ကချင်ပြည်နယ်အတွက် အများဆုံးချန်ထားရမည်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ်တိုးတက်အောင်တည်ဆောက်သွားနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
at 5/21/2016 10:20:00 AM
စစ်သားတွေ သေလို့ စစ်သားမယားတွေ မုဆိုးမဖြစ်ကုန်တာကို စစ်လော်ဘီတွေက အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ရေးကြတယ်။ အချို့ဆို ကိုယ်ဝန်သည်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ကလေးက သူ့အဖေကို မြင်ခွင့်မရတော့ပြီ။ အဖမဲ့ကလေးရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အများကလေးတွေလို လှပနေမှာမဟုတ်တော့ပါ။ ယောကျာင်္းက ကျသွားလို့ ကျန်ရစ်တဲ့ ဇနီးသည်ကလည်း အိမ်ထောင်သည်လိုင်းကနေ ဘယ်တော့ထွက်ရမလဲ မသိပါ။ ထွက်ရတဲ့နောက်မှာလည်း စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအတွက် ဦးပိုင်ကို ထောင်ထားပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပဲ ပိုင်ခဲ့ဖူးလို့ ဆင်ပါးစပ်ထဲ နှမ်းပက်သလောက်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းပါပြီ။ ဖေစစ်ကြီးတို့၊ ရဲမိုးတို့က မြှောက်ပေးရုံနဲ့ ဒီကျဆုံးစစ်သည်တွေ သူရဲကောင်းဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ＂အားတင်းထား အမကြီး၊ အမကြီးမျက်လုံးထဲမှာ ခွန်အားသတ္တိတွေ မြင်နေရတယ်＂ဒီလို လော်ပေးရုံနဲ့ ဒီမုဆိုးမကို သူတို့ ထမင်းတစ်နပ် ခေါ်ကျွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါတောင် ဒီကျဆုံးစစ်သည်တော်တွေနဲ့ စစ်တန်းလျားက မုဆိုးမတွေဟာ သူတို့ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်ဆိုတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်(၂၅)ရာခိုင်နှုန်း စသည် စသည် ရှိကြပါသေးတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ဘယ်တော့မှမတွေးမိတဲ့ တိုင်းရင်းသားမိသားစုတစ်စုအကြောင်းကော ဒီထက် အခြေအနေ ကောင်းနိုင်ပါ့မလား။ ရွယ်ဂျာဆိုတဲ့ ကချင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ မြန်မာစစ်တပ် ဖမ်းခေါ်သွားပြီး ဒီကနေ့အထိ ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိပါ။ ဝိုင်းဖက်ကြတာ၊ ဝိုင်းနမ်းနေကြတာကို ရွာသားတွေ နောက်ဆုံးတွေ့မြင်ကြရပါရဲ့။ နောက်ပြီး KBC က ဆရာမ(၂)ယောက်ကိစ္စဆိုရင်ကော ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ မြန်မာစစ်တပ်ကျည်ဆံကြောင့် အလယ်တန်းကျောင်းသူသမီးသေလို့ တရားစွဲမိတဲ့ ဖခင်က တပ်မတော်ကို အသရေဖျက်မှုနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ တရားစွဲခံရသေးတယ်။ အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘဝကို လွှတ်တော်မှာ ဘယ်နှခါ ဆွေးနွေးဖူးသလဲ။
အချို့က လွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီး တောင်းဆိုကြပါလို့ ပြောကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၅)နှစ်မှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက လွှတ်တော်ထဲမှာ ရောက်နေခဲ့ပြီသားပါ။ လွှတ်တော်ကသာ တိုင်းရင်းသားရေးတွေကို ဗမာတွေနဲ့အတူ တန်းတူမြင်ခဲ့ရင် (၅)နှစ်ထဲမှာ အနည်းဆုံး မိမိပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို မိမိဖာသာ ရွေးနိုင်လောက်ပါပြီ။ ပြည်နယ်အခွန်စနစ်နဲ့ ပြည်နယ်သယံဇာတနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု ရှိလာမှာမုချပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ အခု NLD အစိုးရဟာ တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်ကို ကျော်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။ မကြာခင်က လွှတ်တော်မှာ ရခိုင်ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်း ဆွေးနွေးတော့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် စောစောစီးစီး ဖျာလိပ်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့က လက်နက်ချဖို့ အကြောင်း ပြောတယ်။ အရပ်သားတွေ နစ်နာရတဲ့အကြောင်းတွေကို ပြောတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဗမာစစ်တပ်ကသာ လာမရှုပ်ရင် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းက ညီကြပါတယ်။
ဒီတော့ ပြည်တွင်းစစ်ကို အမှန်တကယ် ပြီးစေချင်ရင်
၁။ လက်နက်ချစကား အလျဉ်းမပြောရ။
၂။ လူမျိုးတိုင်းမှာ သူ့လူမျိုးကို ကာကွယ်မဲ့ တပ်မတော်တစ်ရပ် ထားရှိလိုက ထားရှိခွင့် ရရှိစေရမယ်။
၃။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာ ဘယ်လူမျိုးကမှ အခြားလူမျိုးတစ်မျိုးထက် မကြီးကျယ်ရ။
၄။ တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ခြွင်းချက်မရှိ သဘောတူလက်ခံရမယ်။
ဒါတွေဟာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့ အကြောင်းပဲ။ ပင်လုံစာချုပ်ကို ပြင်ရေးဖို့ မကြိုးစားနဲ့။ ပင်လုံစာချုပ်ကို လေးစားလိုက်နာပါ။ ပင်လုံစာချုပ်ကိုလည်း ပြင်မယ်၊ ခွဲထွက်ခွင့်ကိုလည်း ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုခဲ့ရင် ဒါဟာ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဗမာလက်အောက်သွတ်သွင်းတာပဲ။ ဒီတော့ ပြည်တွင်းစစ်ဟာ ခင်ဗျားတို့လက်ထဲမှာပဲ။ ခင်ဗျားတို့ရပ်ချင်ရင် ရပ်လို့ ရတယ်။ ဆက်တိုက်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် နှစ်ဖက်စလုံး ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဆက်ရှိနေအုံးမှာပဲ။ ပြီးမှ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်ကြနဲ့ပေါ့။
မန်မာပြည်ထောင်စုကို ဘယ်သူဖြိုနေသလဲဆိုရင် ရှင်းပါတယ် လူမျိုးကြီးဝါဒသုံးတဲ့လူမျိုးတွေဖြိုနေပါတယ်။
at 5/13/2016 09:40:00 AM
Tsaw Salum Pan's post.
ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲတယ်ဆိုတာ မြန်မာကပထမဆုံးမဟုတ်ပါ၊ ရှေ့မှာပြိုကွဲခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာဆိုတာ မူရင်းဖြစ်ဖို့သွေးကြောင်တဲ့အမျိုးမို့ အော်ရီဂျင်နယ်ပြိုကွဲရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ။ သူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေက အခုမြန်မာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ပါးပါးလေးဘဲ၊ အကြောင်းပြချက်သိပ်မခိုင်လုံပေမဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ဘဲ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးဖို့ ခွဲထွက်ခဲ့ကြတယ်
နိုင်ငံရေး စစ်ရေး လူမျိုးရေး စီးပွားရေး လူမျိုးကြီးဝါဒရေး သယံဇာတရေး ဘာသာရေး အယူဝါဒရေး စသည်စသည်၊
တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်သဘောအရ ပြည်ထောင်စုခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်သဘောအရခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေက တန်းတူရေးကိုလိုအပ်တယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ဆိုတာ ခွဲထွက်တာထက်အများကြီးပိုခက်ခဲတယ်။ ခွဲထွက်တယ်ဆိုတာ မလွယ်ဘူး၊ အဲဒါထက် တန်းတူရေးက ပိုခက်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးကြီးဝါဒသုံးတဲ့လူမျိုး ရှိနေသရွေ့ တန်းတူရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး၊
အရှေ့အာရှမှာ နိုင်ငံအသစ်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့ မြန်မာပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲပေးရမယ်
မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒတွေရဲ့ မျိုးပြုတ်အောင်ဝါးမြိုနေမှုကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ မြန်မာပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပေးရမယ်။
အခုမြန်မာပြည်ရဲ့ပုံစံက တစ်ပြည်ထောင်စနစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ပြည်ထောင်စနစ်အတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး၊ မလိုအပ်ဘူး၊
တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံနဲ့ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ကို လူမျိုးကြီးဝါဒီတွေ ဖြိုခွင်းလာတာ နှစ်၇၀မှာ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်တွေပြိုပျက်ကုန်ပြီ၊ ဘာမှမကျန်တော့ဘူး၊
အခု အခွံသာသာကျန်တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ပြိုဖို့ဘဲလိုတော့တယ်၊
လူမျိုးကြီးဝါဒတွေဆက်သုံးနေရင် သို့ ဗမာမှုဘဲဆက်ပြုနေရင် သို့ တိုင်းရင်းသားတွေကို နှိပ်စက်ညင်းပန်းသတ်ဖြတ်နေရင် သို့ တိုင်းရင်းမြေတွေမှာ စစ်ဖြစ်အောက်ဆက်ဖန်တီးနေမယ်ဆိုရင်၊
ယုတ်မာကြမ်းကြုတ်တဲ့စနစ်နဲ့မြန်မာပြည်ထောင်စုဆိုတာ သမိုင်းမှာဘဲကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်၊ မြေပုံတွေ အစိတ်စိတ်ကွဲထွက်လာလိမ့်မယ်။
တန်းတူအခွင့်ပိတ်ထားပြီး တစ်ပြည်လုံးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်နေတဲ့ လူမျိုးတွေဖျက်နေပါတယ်။
credit Tsaw Myitsu
Jinghpaw Laika Lajang Komiti de Baw Hpraw dinglaalajin laroi laika,
at 5/13/2016 09:15:00 AM
at 5/13/2016 08:56:00 AM
အတ္တလန္တိတ် သဘောတူ စာချုပ် (Atlantic Charter) ကြောင့် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရ ခြင်း ဖြစ်သလုို၊ ပင်လုံစာချုပ် ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းလဲ ဖြစ်တယ်။
အမေရိကန် က လူ့အခွင့်အရေး အလေးထားတဲ့ နုိုင်ငံ မုို့လို့ လူ့အခွင့်အရေး တုိုးတက်မှုမရှိရင် စီးပွါးရေး ဆက်ပြီး ပိတ်စုို့ ထားမယ် လုို့ ပြောပါတော့တယ်။ တကယ်တော့ လူ့ အခွင့်အရေး ဆုိုတာ လူသား အားလုံးအတွက်ပါ။ မြန်မာတွေက သူတုို့နဲ့ မဆုိုင်သလုိုလုို ပြောနေကြတယ်။ လူမဟုတ်တဲ့ အတုိုင်းပဲ။ ဦးနေ၀င်းရဲ့ အပြောလဲ ကြည့်ပါ၊ လူ့အခွင့်အရေးက မြန်မာပြည်နဲ့ မထုိုက်တန်သေးဘူးတဲ့။ မြန်မာတွေ လူစင်မမှီသေးဘူး ဆုိုတဲ့ သဘော။ အခုလဲ မန့်နေကြတာတွေက ဦးနေ၀င်း အတုိုင်းပဲ။
အမေရိကန် ကုို မခံမရပ် နုိုင် ၀ုိုင်းဆဲ ကြတယ်။ ဟုိုက ဂရုတောင် စုိုက်တာ မဟုတ်။ ကုိုယ့် အခြေအနေကုိုယ်သုံးသပ်ဖုို့ ကျတော့ မေ့နေကြတယ်။
အမေရိကန် ကြောင့်ပဲ မြန်မာပြည် လုို ကုိုလိုနီ နုိုင်ငံတွေ လွတ်လပ်ရေး ရလာတာလဲ သူတုို့ မသိကြဘူး။
ဗြိတိသျှကိုလုိုနီ စနစ် ချုပ်ငြိမ်းဖုို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း ဗြိတိသျှအစုိုးရ နဲ့ အမေရိကန် ကြားမှာ ချုပ်ဆုိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်ကုို အတ္တလန္တိတ် သဘောတူ စာချုပ်လုို့ ခေါ်တယ်။ စာချုပ် အနှစ်ချုပ် ပြောရမယ် ဆုိုရင် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ အကြီးအကျယ် အထိနာ နေတဲ့ ဗြိတိသျှဖက်ကနေ အမေရိကန် တုိုက်ကူမယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ကြီး ပြီးသွားရင်တော့ ကိုလုိုနီနယ်တွေ အားလုံး လွတ်လပ်ရေး ပေးရမည့်အပြင် မည်သည့် လူမျိုးစု မဆုို ကုိုယ့် ကြမ္မာ ကုိုယ် ဖန်တီးခွင့် ပေးရမယ် လုို့ ဆုိုပါတယ်။ ဗြိတိသျှကုိုလုိုနီ စနစ် ချုပ်ငြိမ်းဖုို့ အကြပ်ကုိုင်တဲ့ စာချုပ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပုိုင်း မဟာမိတ် နုိုင်ငံများ အားလုံးသဘောတူပြီး လုိုက်နာဖုို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။
ပင်လုံစာချုပ်ဖြစ်လာတာလဲ အင်္ဂလိပ်က သွေးထုိုးလုို့ မဟုတ်၊ Atlantic Charter ရဲ့ အနှစ်သာရ ကို ပုံဖေါ်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကတော့ ကုိုယ့်ကြမ္မာကုိုယ် ဖန်တီးခွင့် (all people hadaright to self-determination;) ဆုိုတဲ့ စာချုပ်ရဲ့ အနှစ်ချုပ် နံပါတ် (၃) ပါ အချက်ကုို ပုံဖေါ် ခြင်း ဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ အချက်ကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် မြန်မာတွေ အင်္ဂလိပ်ဆီက လွတ်လပ်ရေး ဆုိုတာ အိမ်မက်တောင် မက်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာစစ်ကုိုတောင် နုိုင်ထားတဲ့ နုိုင်ငံကုို တုိုက်လုို့လဲ နုိုင်မှာမဟုတ်၊ ကုိုလုိုနီ စနစ်ပဲ ဆက်ရှိရင် ရှိနေနုိုင်တယ်။
အရေးကြီးတဲ့ အချက် (၈) ချက်ကတော့
(1) no territorial gains were to be sought by the United States or the United Kingdom;
(2) territorial adjustments must be in accord with the wishes of the peoples concerned;
(3) all people hadaright to self-determination;
(4) trade barriers were to be lowered;
(5) there was to be global economic cooperation and advancement of social welfare;
(6) the participants would work foraworld free of want and fear;
(7) the participants would work for freedom of the seas;
(8) there was to be disarmament of aggressor nations, andapost-war common disarmament.
အသေးစိပ်လေ့လာချင်သူများ ဖတ်ရန် >> https://history.state.gov/milestones/1937-1945/atlantic-conf
at 5/11/2016 11:21:00 AM
Wang Hkang Awng Marip
Kala Mung de Jinghpaw ni kaning rai du mat ai kun i? Miwa Mung de Jinghpaw ni kaning rai du mat ai kun I? nga nna jahkring hkring san katut ai. Inglik myi mut wa garai n du shang yang, tinang Kachin nialapran jarit n nga ai. Mung jarit ngu ai gaw, Inglik wa masat reng hkau ya ai she re. Ndai lam mung ma ni hpe hkai dan ga.
အင်းဝနေပြည်တော် kaw gaw ram ram gumhkawng lai wa sai Kasan Baw Dawq Nawng
at 5/11/2016 11:17:00 AM
Nsang Awng La zawn, htawng ninghkring langai, moi mung Myu sha ni hta paw lai wa sai. Raitim, dai ten hta Myen Mung kaw modo car pyi n nga shi ai ten re majaw, maigan du hkra chyawm n gumhkawng ai. အင်းဝနေပြည်တော် kaw gaw ram ram gumhkawng lai wa sai.
By wang hkang awng marip
at 5/11/2016 11:09:00 AM